PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-11-29 - Lumisiwe ulwakhiwo lwezikolo Emfuleni
Lumisiwe ulwakhiwo lwezikolo Emfuleni
Isolezwe lesiXhosa - 2018-11-29 - IINDABA - PHINDA KULA
KAPA: LUSAMI ngxi ulwakhiwo lwezikolo ezibini zamabanga aphantsi naphakamileyo kummandla waseMfuleni eKapa.
Oku kulandela emva kokuba iqela labazali lathintela ukusebenza kwekontilaki yolwakhiwo, ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kweyeDwarha.
Abahlali badiza ukuba kule minyaka imihlanu idlulileyo bebesilwa idabi norhulumente malunga nokungabinazikolo zaneleyo Emfuleni.
Izikolo zaseMfuleni zizonke zezamabanga aphantsi ezisixhenxe kwanezithathu zamabanga aphakamileyo.
Abahlali bathi igumbi ngalinye lokufundela linabafundi abangamashumi amahlanu anesihlanu nto leyo bathi ibangela kube nzima ukuba inkqubo yezifundo iqhube ngendlela eyiyo kumagumbi okufunda.
Bathi ngokomthetheo kumele ukuba igumbi ngalinye linabafundi abangamashumi amathathu anesihlanu ukuya kumashumi amane bangadluleli ngapha kwelo nani, nto leyo ithetha ukuba isikolo sonke bekumele ukuba sinabafundi abayi1050.
“Kunyaka ophelileyo ngethuba sifakana imilomo nomphathiswa wemfundo eNtshona Koloni, wasithembisa ngolwakhiwo lwezikolo ezibini ukuzama ukukhawulelana nale meko, sakuvuyela kakhulu oko,” utshilo uMfundisi Thembekile Gqwaka usihlalo wenqwanqwa lezeMfundo Emfuleni.
Uyavuma ukuba emva koko bachonga iindawo eziza kwakhiwa kuyo ezi zikolo, esokuqala, ukutsho oko esamabanga aphantsi babona umhlaba ongakwindlea iDeputy nesitalato iPalamente, ze esamabanga aphakamileyo basibonela indawo ngakwiziko lezicimamlilo kwalapha Emfuleni.
Uthi ngethuba bediza iindawo ababone kuzo imihlaba akuzange kubekho ngxaki.
UGqwaka uthi kwiveki yesibini kweyeThupha kulo nyaka kufike ingxelo malunga nendawo apho kuza kwakhiwa khona izikolo eFairdale. Utyhola ngelithi zange kubekho thetha-thethwano malunga nale mihlaba kuza kwakhiwa kuyo. “Sabacela ukuba ime intlanganiso ababeze kuyo kuba into abayenzayo ayilunganga kuba khange kuthethwe nabahlali,” utshilo uGqwaka.
UGqwaka uthi kungokunje indawo ekwakhiwa kuyo isikolo samabanga aphantsi ikumgama weekhilomitha eziyi2.4, uthi oku kubeka ubomi babantwana esichengeni ngelithi indlela iHindle eyohlula uMfula neFairdale inobungozi kuba ibaleka iimoto ngesantya esiphezulu.
Uthi aba ngabantwana abaneminyaka eqala kwisixhenxe ekuza kufuneka ukuba bayinqumle mihla le xa besiya esikolweni.
“Ngoku sithi kwanele kuba le nto bayenzayo ngoku kukuxhaphaza abantu abamnyama kwanokuxabanisa abantu abamnyama,” utshilo uMfundisi uGqwaka, ngelithi kungokunje eli loMzantsi Afrika linengxaki kuba abantu bebala bakhalazela imilo yemiguvela, esitsho ukuba oku kukuzama ukuthelekisa abebala nabantsundu.
Wongeze ngelithi esi isehlo sesesibini kuba kuqala bantlanywa ngurhululemente kuba waqala ngesikhululo samapolisa wayosibeka eBlackhealth esithi sesaseMfuleni, nalapho adiza ukuba bahamba iikhilomitha ezintlanu.
“Bubuvuvu nje bamanyathelo oqhankqalazo olukhokelwe ngabahlali, oku kuza kulibazisa nje ulwakhiwo lwezikolo ezitsha yaye oku kuza kuchaphazela abantwana babo” utshilo uJessica Shelver usomlomo weMfundo eNtshona Koloni. OkaShelver uthi belisebe babongoza ukuba abazali bakhokelise imfundo yabantwana phambi kokuba bafake ezinye izinto.
Uyavuma ukuba ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kweyeThupha kwabanjwa intlanganiso eNal’ikamva nalapho kwagqitywa ukuba kwintlanganiso elandelayo kwakwamkelwa abahlali baseSilversands enye yeelokishi ezisondeleyo Emfuleni.
Uthi le ntlanganiso yabanjwa ngomhla wesithandathu kweyoMsintsi. Wongeze ngelithi kwezi ntlanganiso kwavunyelwana ukuba ngolwakhiwo lwezi zikolo zibini ukuzama ukuphungula umthwalo kwezo sele zikhona.
Usihlalo kumbutho iSilversands Rate Payers Association uEarl van der Ross uthi kwinto yonke eyenzeka kwingingi yabo kufuneka kuqale kuxhamle abahlali phambi kokuba kuthathwe abantu abasuka kwezinye iindawo.